सन् २०२१ आश गरेजस्तै सामान्य होला ? – Nepal Japan
सन् २०२१ आश गरेजस्तै सामान्य होला ?
नेपाल जापान २४ पुष २२:०५
कोरोना महामारीबाट गुज्रिदै सन् २०२० लाई विदाई गरिएसँगै सन् २०२१ कस्तो होला भन्ने कौतुहलता धेरैमा देखिएको छ । अधिकांशले नयाँ बर्षको स्वागत र शुभकामनाका क्रममा पनि सन् २०२१ सन् २०२० को जस्तो नहोस भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । जनअपेक्षा र अवितव्य हुने कुरा एउटा पाटो हो भने नियमित र संभावित अवस्था अर्को पाटो हो । धेरै कार्यक्रमहरुमा विद्युतीय माध्यमहरुको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । केही अनुमान गर्न सकिने नियमित र संभावित घटनाहरुको यहाँ चर्चा गरिएको छ ।